chikoro - ALinks
Iyo Chikoro Uye Dzidzo System muCanada
December 26, 2020 Antika Kumari Kanadha, chikoro
Canada imwe yenyika dzakanakisa pasi rese. Muna 2015, 90% yevanhu muCanada vane makore makumi maviri nemashanu kusvika makumi matanhatu nemaviri vaive vapedza chikoro chavo chepamusoro, uye 25% yakanga yawana dzidzo yepasekondari. Iyo yefundo system
Dzidzo Sisitimu uye Zvikoro MuChina
Dai 19, 2020 Antika Kumari China, chikoro
China, inozivikanwa seRepublic of China, nyika iri kuEast Asia. China ine huwandu hukuru hwepasi uye nyika yechina yakakura. Maitiro edzidzo yenyika ino ari mune imwe yenyika dzepamusoro. Standard
Dzidzo Sisitimu yeMalawi
April 3, 2020 Antika Kumari Marazhiya, chikoro
Kana iwe uri kuenda kuMalaysia nemhuri yako. Panguva iyoyo, dzidzo yevana vako ndiyo inonyanya kunetsekana. Asi, iyo dzidzo system muMalaysia ndeye yemhando yepamusoro. Zvakare, vese vekare-vabereki vabereki havana kunetseka zvakanyanya
Chikoro & Dzidzo MuUnited States Of America
April 1, 2020 Shubham Sharma chikoro, USA
United States of America ine vanhu vazhinji. Iyo ine huwandu hwayo makumi mashanu. Iyo USA zvakare iri nani uye nyika yakanakisa kushanda, sezvo iine mamwe emakambani ane mukurumbira munyika. Kana munhu
March 6, 2020 Karuna Chandna Paresitina, chikoro, kudzidza
Sisitimu redzidzo- Iyo nzira yekudzidzisa muPalestine inobatwa nePalestine Ministry. Kuno zvikoro zvinowanzogovaniswa kuita vakomana, vasikana. uye zvikoro zvekudzidzisa pamwe. Kunyoresa kwakakwira pamwero unosvika makumi masere muzana. Mawereji okuverenga nokunyora zvakare akakwira ipapo. Zvikoro zvakavakirwa
Dzidzo system: Democratic Congo
March 5, 2020 Karuna Chandna DR Congo, chikoro
Democratic Congo inyika mazana matatu nemakumi mana nemazana mana emakiromita muEquatorial Africa. Vagari vayo vanopfuura mamirioni manomwe. Yakakomberedza 342,000% yeiyo Kongo bhajeti inoshandiswa pachikoro chedzidzo. 7% padzidzo yepuraimari, 12.6% kusekondari uye 40% padanho repamusoro. Uye
Russian Dzidzo Sisitimu Guru
March 1, 2020 Maitri Jha Rashiya, chikoro
Russia inzvimbo yakanaka yekugara uye kana iwe uchienda kuRussia kupfuura iwe unofanirwa kuve unonetsekana nezve dzidzo uye chikoro chemwana wako. Iyo Russian dzidzo sisitimu yakakamurwa kuita zvikamu zvitatu zvinova Preschool, Primary uye Sekondari Dzidzo.
Dzidzo yeIraq: Zvikoro zveIraq
March 1, 2020 Karuna Chandna Iraki, chikoro, kudzidza
Iraki Dzidzo system inodzorwa nehurumende yenyika yeIraq. Iyi yeruzhinji dzidzo yenyika inopihwa mahara kubva kuPrimary kuenda kuDoctoral degree. Dzidzo yega yega iripo uye mari yezvikoro inoita kuti zvisafadze kune vazhinji vagari. Iyo huru
Iyo Chikoro Uye Dzidzo System muMexico
February 29, 2020 Antika Kumari Mekisiko, chikoro
Kana iwe uri kutamira kuMexico nemhuri yako, sarudzo yakakosha yauchasangana nayo ndeye nzira yekuenderera mberi nechikoro chevana vako. Chikoro Uye Dzidzo Sisitimu muMexico inogona kunge isina chikoro chakasimba cheveruzhinji chiripo. Asi pane zvakasiyana
Dzidzo Sisitimu Afghanistan & Rondedzero Yezvepasi Pose Zvikoro muKabul
February 29, 2020 Maitri Jha Afuganisitani, chikoro
Kana iwe uri kuronga kutamira kuAfghanistan nemhuri yako pane unofanirwa kutarisa maitiro edzidzo eAfghanistan. Munyaya ino, tichakurukura nezvechikoro uye dzidzo nzira muAfghanistan. Afghanistan iri pakati penyika dzine yakaderera